कोरोना समाप्त होस् भन्दै विशेष पूजा ; ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् पशुपती नाथ ले तपाईँको सबै इच्छा पुरा गर्ने छन् ! - Mitho Khabar
October 24, 2020 mithokhabarLeaveaComment on कोरोना समाप्त होस् भन्दै विशेष पूजा ; ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् पशुपती नाथ ले तपाईँको सबै इच्छा पुरा गर्ने छन् !
Breaking: अन्तत दशैभर लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय, बाहिर निस्किन नपाइने ! हेर्नुहोस् पूरा विवरण ;